Ngokwe-KGI, iApple iza kuphehlelela ii-AirPods 'eziphuculweyo' kwisiqingatha sesibini se2018 | IPhone iindaba
Ngokwe-KGI, iApple iza kuphehlelela 'ukuphucula' ii-AirPod kwisiqingatha sesibini se2018
Kukho amarhe amaninzi alumkisa ngokufika kwee-AirPods ezintsha zalo nyaka kwaye ekugqibeleni zazikho, amarhe. Kule meko, i-KGI iphinda ilumkise ukuba ukufika kwe ezinye ii-AirPods ezihlaziyiweyo zinokufika kwisiqingatha sesibini se2018.
Enye yeenkcukacha ezazihleli ziphawulwe kwi-retina yethu yayikukuboniswa kweemodeli ezintsha ze-iPhone kunye nezabo Isiseko sokutshaja somoya, apho ii-AirPods okanye endaweni yoko ibhokisi yokutshaja yee-AirPod ngenqaku elitsha le-Qi engenazingcingo yaboniswa.
Ukuhanjiswa kwale bhokisi kunyuse amarhe malunga nokuqaliswa kwee-AirPod ezintsha kwangaphambi kokucwangciswa, kodwa ngoku umhlalutyi uza ngaphambili UMing-Chi Kuo, ngengxelo echaza ukuba iApple izakukhupha ingxelo entsha kamva kwaye kunokwenzeka ukuba Lo iya kuba ngumzuzu okhethiweyo ukongeza i-inductive charge kwibhokisi yee-AirPods.
Ngayiphi na imeko, ukuwela ulwazi kunendawo ekunzima ukuyiqonda, mandikucacise. I-Apple, ibonise ukuba into entsha yezi AirPods zilandelayo iya kuba yibhokisi ene-Qi etshaja ukuhambisa ngentambo kwaye le yinto sonke esiyibonileyo xa kuboniswa i-iPhone X kwaye iyinyani ngokupheleleyo, ke ukumiliselwa kwebhokisi yee-AirPod zangoku ngeQi kwaye kwisiqingatha sesibini sonyaka sokumiliselwa kwee-AirPods ezithile ezinokuphikisana kwaye ngaphezulu kwako konke ukuzala.
Ukongeza, olu hlobo lolwazi "lunokucotha" ukuthengisa kancinci kuba siyazi ukuba into entsha isaza kuza. Kwelinye icala, kufuneka siqinisekise ukuba oku akuqwalaselwa okwangoku ukuba sijonga ukunqongophala kwee-AirPods ezinazo iApple ngoku ezivenkileni, ukunqongophala kukaMing-Chi Kuo ngokwakhe kwiingxaki ezithi Eyona bhetri yePCB yenza ubonelelo. Ngaba ii-AirPods ziyaqhubeka nokuthengisa kakuhle de zibangele ukunqongophala kwemveliso okanye ngaba oku kungenxa yeengxaki zemveliso ezinazo iApple? Ngaba iApple iya kuphehlelela ibhokisi yokutshaja yeQi ngaphambi kokuhlaziya ii-AirPods okanye ngaba ukuvuselelwa kubandakanya ngqo le bhokisi yeQi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Ngokwe-KGI, iApple iza kuphehlelela 'ukuphucula' ii-AirPod kwisiqingatha sesibini se2018
Sizakulinda ngomonde kodwa ngolindelo olukhulu kolu luhlu, kwaye nangakumbi ukuba kukutsiba okusemgangathweni !!
Ngelixa siza kuqhubeka nokonwabela ezangoku ezingakholelekiyo !!!
Mna ndilindele olu hlaziyo lucingelwa ukuba ndiluthenge luyandicaphukisa ngokwaneleyo oku "kusilela kwengcaciso" kwicala le-Apple….
Andiqondi ukuba bazisa ibhokisi yoqheliso kunye ne-AirPower (phakathi ku-Septemba) emva koko balibazise ukuvela kwayo phantse unyaka wonke …… kuba ngokolu lwazi alunakuphuma de kube nguJuni-Septemba 2018….
Andiqondi nokuba, emva kokunikezela nge-chip ye-W2, abasenakho ukuyiphumeza kwii-headphone ekuthi, ithiyori, yenzelwe ...
Ngapha koko, ndiyifumana iyinto engaqhelekanga kakhulu… .. kwaye ngeli xesha ndifuna ukuthenga iiAirPod ngoku!
Ndivumelana ngokupheleleyo nawe Xavi, ingxaki iyafana njengesiqhelo… IApple ihamba ngesantya sayo, ngaphandle kokungxama kwaye ngaphandle kwekhefu, kodwa oku kungabakhathaza abasebenzisi ngaphezulu kwemfuneko, njengoko kunjalo.
Ndiyathemba ukuba oku kuqala konyaka izinto ziyaphucuka kwaye indlela yee-AirPod ichaziwe kodwa kubonakala ngathi inzima.
Ewe kunjalo, kubonakala kunzima kakhulu ukuba inkcazo ifike ekuqaleni kwale 2018… ..
I-PS: nangona ndiyazi ukuba oku akunanto yakwenza nesihloko, ndingathanda ukwenza uluvo oluncinci malunga ne-podcast ethi uLuis, uNacho kunye nawe uyenza veki nganye (okoko uMiguel ebelahlekile iiveki ... XD) ukumamela kuphela kuwe (kuba ndiyimamela nge-iTunes), ndifumana amaxesha amaninzi ukuba uthanda ukwenza ngathi abantu bayakubona ngalo lonke ixesha, ubonisa imifanekiso okanye izikrini ze-iPhone yakho okanye iMac kwaye amaxesha amaninzi abo kuthi mamela inomdla kuphela kwinto oyithethileyo.ufundise ikhamera, kunganomdla ukuba wenze umzamo wokuchaza ngokufutshane into oyifundisa ikhamera ...
Ngaphandle koko ndiyayithanda ipodcast yakho kwaye ndiyayithanda indlela yokuqokelela ekuhlaleni enezinto ezingenamsebenzi malunga nelizwe leapile oqhele ukwenza.
PD2: kwaye malunga nepodcast yokugqibela kunye namaxesha alandelayo uyazi ukuba i-iPhone 6S / 7/8 zonke ziphethe i-2 gb yeRam… XD
Ndiyabulisa kwaye uqhubeke njalo!
I-xD ingxaki kukuba sisasaza ngqo kwi-YouTube kwaye ngamanye amaxesha siyalibala ukuba baninzi abasebenzisi abanjengawe abangasiboniyo kodwa basiva. Ingxaki yokukholelwa kwi-youtuber hahaha siza kuyilungisa le nto (iqatshelwe kwincwadi yengcebiso) kwaye enkosi kakhulu kukhuthazo lwakho kwaye ngaphezu kwako konke ngokusinyamezela nokusimamela 😀
Ndiyabulisa Xavi !!
Unikwe into oyiphawulayo, luyintoni uluvo lwakho? Ndithenga iiAirpods zangoku okanye ndilinde ezitsha?
Ngokoluvo lwam kuhlala kulungile ukuthenga izinto xa ufuna kwaye ungalindi ujonge ukuba bayakukhupha na ukuphononongwa kwemveliso. Ngokufanelekileyo inguqulelo entsha iya kufika, kodwa oku akunakuphepheka kwaye ngelixa zifika uya kuba sele uyonwabele ii-AirPods zakho.
Ingcebiso elungileyo! 😉 enkosi kakhulu!
I-App Santa ibuya nezaphulelo ze-app ukuya kuthi ga kuma-80%